တိုက်ခန်းများ ငှားရန်အတွက် တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ - 833 စာရင်းများ | FazWaz.com.mm
တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ ငှားရန်အတွက် တိုက်ခန်းများ
FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 833 တိုက်ခန်းများ
Virtual 3D tours of ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုက်ခန်းများ for rent
Turn on this filter to only view တိုက်ခန်းများ for rent with 3D virtual tours!
1 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at 1 Bedroom Condo for rent in Yangon
1 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at 1 Bedroom Condo for rent in Star City Thanlyin, Yangon
Don't miss out! Get notified when new တိုက်ခန်းများ for rent are listed တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 382,347 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ရန်ကင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Ya...
12382,347 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at3Bedroom Condo for rent in Kamayut, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,300 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Co...
1 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at 1 Bedroom Condo for rent in Bahan, Yangon
1 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at 1 Bedroom Condo for rent in Thanlyin, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 622 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် သန်လျင်မြို့, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Thanl...
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,400 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Co...
Make an offer directly to the owner ofaတိုက်ခန်း that is for rent တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 625 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် သန်လျင်မြို့, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for rent in Thanl...
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at3Bedroom Condo for rent in Golden Royal Sayarsan Condo, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,892 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at2Bedroom Condo for rent in Crystal Residences @ Junction Square, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,404 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent...
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at3Bedroom Condo for rent in Grand Sayar San Condominium, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,684 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
We verify all တိုက်ခန်းများ listed for rent တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး on FazWaz.com.mm
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,558 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at2Bedroom Condo for rent in Thanlyin, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 937 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် သန်လျင်မြို့, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for rent...
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at3Bedroom Condo for rent in Crystal Residences @ Junction Square, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,404 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at3Bedroom Condo for rent in Shwe Hintha Luxury Condominiums, Yangon
3 Bedroom Condo for rent in HILLTOP VISTA CONDOMINIUM, Yangon
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at3Bedroom Condo for rent in HILLTOP VISTA CONDOMINIUM, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,600 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
3 Bedroom Condo for rent in The Gems Garden Condominium, Yangon
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at3Bedroom Condo for rent in The Gems Garden Condominium, Yangon
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at3Bedroom Condo for rent in Pyay Garden Condominium, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,404 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် South Okkalapa, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for r...
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at2Bedroom Condo for rent in The Gems Garden Condominium, Yangon
3 Bedroom Condo for rent in pearl condo yangon, Yangon
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for rent at3Bedroom Condo for rent in pearl condo yangon, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ငှားရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,680 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for rent...
331,680 စတုရန်းပေ
1 - 30 ၏ 833 အဖြေများ
သင့်အတွက် 434 တိုက်ခန်းများ
ငှားရမ်းခြင်း :3သိန်း - 149 သိန်း
သင့်အတွက် 342 တိုက်ခန်းများ
ငှားရမ်းခြင်း :2သိန်း - 194 သိန်း
သင့်အတွက် 54 တိုက်ခန်းများ
ငှားရမ်းခြင်း :6သိန်း - 184 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း :7သိန်း - 49 သိန်း
ရန်ကုန်ဟုလည်းလူသိများသောရန်ကုန်သည်ယခင်ကမြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံ၏အဓိကဝင်ပေါက်နှင့်ဆိပ်ကမ်းလည်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ရန်ကုန်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေ ၅ သန်းကျော်နေထိုင်ရာမြို့ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ငှးရမ်းခ ဈေးကွက် ပုံစံများ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်တွင် နောက်ဆုံး ငှားရမ်းခ နှုန်းထားများကို ရှာပါ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် ငှားရမ်းနိုင်သော အိမ်များအတွက် လစဉ်ငှားရမ်းခ အလယ်အလတ်သည် 17 သိန်း ဖြစ်သည်။ The median monthly rent per square feet in ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး is0သိန်း ယခုလက်ရှိတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 833 အိမ်ခြံမြေများ ငှားရန် ရရှိနိုင်သည်။
ရန်ကုန်တွင်ငှားရန်ရှိသောတိုက်ခန်းများမှာအဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းများ၊ အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုရှိသောတိုက်ခန်းများဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အတွင်း၌အဟောင်းအဆောက်အအုံဟောင်းများရှိသော်လည်းနိုင်ငံခြားသားများသည်များသောအားဖြင့်အသစ်တည်ဆောက်ထားသောခေတ်မီတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံများတွင်နေထိုင်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။
ပုံမှန်တိုက်ခန်းများသည်ဈေးအကြီးဆုံးတိုက်ခန်းဖြစ်သည်။ သူတို့များသောအားဖြင့်စတူဒီယိုခန်းများသို့မဟုတ်နံရံများကိုတုပ။ ပါးလွှာသောအခန်းကန့်များပါ ၀ င်ပြီးကားပါကင်ကဲ့သို့သောသာယာအဆင်ပြေမှုများရှိသည်။
အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းများကိုနာမည်ကြီးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှတည်ဆောက်သည်။ ပျှမ်းမျှအားဖြင့်၎င်းတို့တွင်အိပ်ခန်းသုံးခန်းရှိပြီးကားပါကင်များ၊ လုံခြုံရေးအစောင့်များနှင့်ဓာတ်လှေကားများကဲ့သို့သောသာယာအဆင်ပြေမှုများရှိသည်။ စံတိုက်ခန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့သည်ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာတွင်ပိုမိုခေတ်မီသည်။
တန်ဖိုးအရှိဆုံးတိုက်ခန်းအမျိုးအစားမှာတိုက်ခန်းများဖြစ်သည်။ ငှားရမ်းသူများသည်အပြည့်အဝအလှဆင်ထားသောအခန်းများနှင့်ရေကူးကန်များ၊ အားကစားရုံများ၊ ကလေးကစားကွင်းများ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများ၊ ၂၄ နာရီလုံခြုံရေးစနစ်များနှင့်ကေဘယ်လ်တီဗီကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်သာယာအဆင်ပြေမှုများကိုခံစားနိုင်သည်။
လူအများစုကရွှေတိဂုံဘုရားကိုကြည်နူးဖို့ရန်ကုန်ကိုလာကြတယ်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးသောစေတီပုထိုးများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိအမြင့်ဆုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာ ၀ င်နေရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မီတာ ၁၀၀ အမြင့်ရှိသောအလယ်ဗဟိုတွင်ရွှေဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးစိန်နှင့်ပတ္တမြားကဲ့သို့အဖိုးတန်ကျောက်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အခြားမြို့တစ်မြို့တွင်ထင်ရှားသောစေတီတော်မှာဆူးလေဘုရားနှင့်ဘိုတထောင်ဘုရားဖြစ်သည်။
စေတီပုထိုးများအပြင်ရန်ကုန်သည်အခြားဆွဲဆောင်စရာများစွာရှိသည်။ Chin ည့်သည်များသည်တက်ကြွသောတရုတ်မြို့တွင်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်၊ အာဇာနည်များ၏ဂူဗိမာန်သို့လှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပျမ်းမျှငှားရမ်းခနှုန်းထားများ , အိမ်အရွယ်အစားဖြင့်
တိုက်ခန်း အရွယ်အစား လစဉ် ပျမ်းမျှငှားရမ်းခ 1 အိပ်ခန်း (129 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 17 သိန်း2အိပ်ခန်းများ (300 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 22 သိန်း3အိပ်ခန်းများ (316 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 25 သိန်း4အိပ်ခန်းများ (63 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 32 သိန်း5အိပ်ခန်းများ (12 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 42 သိန်း
လူအများစုကရန်ကုန်၏လူနေမှုစရိတ်နိမ့်ခြင်းကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနေရာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ သို့သော်လည်းမြို့တွင်းရှိပစ္စည်းနှင့်ငှားရမ်းခစျေးနှုန်းများမြင့်တက်နေကြောင်းနိုင်ငံခြားသားများကသတိပြုသင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လူနေမှုစရိတ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက် ၄၀% ခန့်လျော့နည်းသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်တရားဝင်အသုံးပြုသောငွေကြေးမှာမြန်မာကျပ်ငွေဖြစ်သည်။ ၁ အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ် ၁,၃၆၀ ခန့်ပြောင်းသည်။ အချို့သောခရီးသွားareasရိယာများတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေပေးချေနိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့သည်ယူနန်ပြည်နယ်၏အများဆုံးငွေတောင်းခံလွှာများကိုသာလက်ခံကြသည်။
ရန်ကုန်တွင်အကြီးဆုံးဘာသာတရားမှာထေရ ၀ ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများသည်ဤဘာသာတရားအပေါ်အခြေခံသည်။ လူအများစုကဗမာစကားကိုနိုင်ငံ၏ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားသည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောဆိုခြင်းမရှိသော်လည်းလူအများစုတို့သည်အခြေခံဘာသာစကားကိုနားလည်ကြသည်။
ရန်ကုန်တွင်ငှားရမ်းရသည့်အကြောင်းရင်း ၃ ချက်
လွတ်လပ်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြောင်းခြင်း - ငှားရမ်းခြင်းဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သင်အကြိုက်နှစ်သက်သည်ကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ငှားရမ်းခကိုချိုးဖောက်ခြင်းသည်သင်၏ပစ္စည်းများကိုရောင်းချနိုင်ခြင်းထက်များစွာစျေးသက်သာသည်။
အခြေခံအဆောက်အအုံများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး - မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘဏ္financialာရေး၊ စီးပွားဖြစ်နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာအနေဖြင့်ရန်ကုန်သည်နိုင်ငံ၏အရေးကြီးသောမြို့တစ်မြို့အဖြစ်ရှုမြင်ပြီး ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်သူတို့သည်မြို့တော်အားလုံခြုံစိတ်ချရသော၊ တက်ကြွ။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စမတ်မြို့အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ မြို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်မှုသည်အလွန်ထင်ရှားသည်။
မလိုအပ်သောအခကြေးငွေများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းဆိုသည်မှာပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းကငှားရမ်းခတွေအားလုံးကိုရှောင်ရှားစေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ကပြုပြင်တာတွေ၊ ပြန်လည်ပြုပြင်တာတွေအတွက်တာ ၀ န်ရှိတယ်။
အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်) 434 တိုက်ခန်းများ ရရှိနိုင်သော
အရှေ့ပိုင်းခရိုင် 342 တိုက်ခန်းများ ရရှိနိုင်သော
တောင်ပိုင်းခရိုင် 54 တိုက်ခန်းများ ရရှိနိုင်သော